သူမဘဝတစ်သက်လုံး လုံးဝမေ့လို့မရနိုင်တော့မယ့် ပကာသနမပါတဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုကြည်နူးစွာနဲ့ပြသလာတဲ့ မေတိုးခိုင် - Media Update News
သူမဘဝတစ်သက်လုံး လုံးဝမေ့လို့မရနိုင်တော့မယ့် ပကာသနမပါတဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုကြည်နူးစွာနဲ့ပြသလာတဲ့ မေတိုးခိုင်
နိုင်ငံကျော် အကယ်ဒမီများရှင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့တူမရင်းလေးဖြစ်တဲ့ မေတိုးခိုင်ကတော့ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဝါသနာကြီးပြီး ကြိုးစားလေ့လာချင်စိတ် ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ် ။
မေတိုးခိုင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ရပြီး အခုဆိုရင် အရင်အတိုင်း အလုပ်တွေကို ပြန်လည်
လုပ် ကိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ (၇) ရက်နေ့ကတော့ မေတိုးခိုင်ရဲ့ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီး အဆိုပါ မွေးနေ့လေးဟာ သူမဘဝအတွက် မမေ့နိုင်စရာ အမှတ်တရလေးဖြစ်တဲ့
အကြောင်းကို အခုလိုပဲဝေမျှလာပါတယ် ။ “Long overdue birthday post . အမှတ်တရလေးအဖြစ်ပုံလေးတွေစုပြီး တင်မယ်နော် ❤️ နောက်ထပ် မမေ့တော့မယ့် နေ့တစ်နေ့ ။
တစ်နေကုန် ပီတိ ဖြစ်စရာလေးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ မွေးနေ့။ ဖြစ်ချင်တာလုပ်ချင်တာ အမြဲဘေးကပါရမီဖြည့်ပေးတဲ့ ဖူးချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံး ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် ။
မွေးနေ့ကိုပို အမှတ်တရဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ ချစ်ရတဲ့ ဖူးရဲ့ Maykeys တွေကိုလည်း ရင်ထဲကနေ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ အလှူငွေ အလှူပစ္စည်းတွေ
လှူပေးတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။” ” ထမင်းဘူးတွေစီစဉ်ပေးတဲ့ စေတနာအပြည့်နဲ့ အန်တီအေးသဇင် နဲ့ masterchef အဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အမြဲ အလှူဆိုပါဝင်အားဖြည့်ပေးတဲ့ sunkist ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြသူအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် တစ်ယောက်ချင်းဆီ
မပြန်နိုင်တာလည်းနားလည်ပေးပါနော် ။ ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်အချိန်တစ်ခုအထိ လိုအပ်သူတွေကိုတစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေကူညီနိုင်တဲ့လက်တစ်စုံဖြစ်ချင်ပါတယ် 🙏🏼❤️” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ပီတိလေးကို မျှဝေလာပါတယ် ။
သူမဘဝတစ္သက္လုံး လုံးဝေမ့လို႔မရႏိုင္ေတာ့မယ့္ ပကာသနမပါတဲ့ေမြးေန႔အမွတ္တရပုံရိပ္ေတြကိုၾကည္ႏူးစြာနဲ႔ျပသလာတဲ့ ေမတိုးခိုင္
ႏိုင္ငံေက်ာ္ အကယ္ဒမီမ်ားရွင္ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ရဲ႕တူမရင္းေလးျဖစ္တဲ့ ေမတိုးခိုင္ကေတာ့ အႏုပညာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဝါသနာႀကီးၿပီး ႀကိဳးစားေလ့လာခ်င္စိတ္ ရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ေမတိုးခိုင္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥေၾကာင့္ အႏုပညာအလုပ္ေတြနဲ႔ ေဝးကြာခဲ့ရၿပီး
အခုဆိုရင္ အရင္အတိုင္း အလုပ္ေတြကို ျပန္လည္လုပ္ ကိုင္ေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ (၇) ရက္ေန႔ကေတာ့ ေမတိုးခိုင္ရဲ႕ ေမြးေန႔ေလးျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေမြးေန႔ေလးဟာ သူမဘဝအတြက္ မေမ့ႏိုင္စရာ အမွတ္တရေလးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို အခုလိုပဲေဝမွ်လာပါတယ္ ။ “Long overdue birthday post .
အမွတ္တရေလးအျဖစ္ပုံေလးေတြစုၿပီး တင္မယ္ေနာ္ ❤️ ေနာက္ထပ္ မေမ့ေတာ့မယ့္ ေန႔တစ္ေန႔ ။ တစ္ေနကုန္ ပီတိ ျဖစ္စရာေလးေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ေမြးေန႔။ ျဖစ္ခ်င္တာလုပ္ခ်င္တာ အၿမဲေဘးကပါရမီျဖည့္ေပးတဲ့ ဖူးခ်စ္ရတဲ့သူေတြအားလုံး ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္ ။ ေမြးေန႔ကိုပို
အမွတ္တရျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ ခ်စ္ရတဲ့ ဖူးရဲ႕ Maykeys ေတြကိုလည္း ရင္ထဲကေန အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ အလႉေငြ အလႉပစၥည္းေတြ လႉေပးတဲ့သူေတြလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။” ” ထမင္းဘူးေတြစီစဥ္ေပးတဲ့ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ အန္တီေအးသဇင္ နဲ႔ masterchef
အဖြဲ႕ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ အၿမဲ အလႉဆိုပါဝင္အားျဖည့္ေပးတဲ့ sunkist ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးၾကသူအားလုံးလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္
တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီမျပန္ႏိုင္တာလည္းနားလည္ေပးပါေနာ္ ။ ဘဝရဲ႕ေနာက္ဆုံးထြက္သက္အခ်ိန္တစ္ခုအထိ လိုအပ္သူေတြကိုတစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေနကူညီႏိုင္တဲ့လက္တစ္စုံျဖစ္ခ်င္ပါတယ္ 🙏🏼❤️” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ ပီတိေလးကို မွ်ေဝလာပါတယ္ ။
Previous Article စောစောစီးစီးဘာဖြစ်မှန်းမသိ ဝမ်းနည်းပက်လက်အော်ငိုနေတဲ့မောင်ဖြစ်သူပိုင်တံခွန်ကို ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးဆေးထိုးလိုက်တဲ့ မေချစ်သွေး
Next Article ဗီဒီယိုရိုက်နေမှန်းမသိပဲ ပို့စ်တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလုပ်နေတဲ့ သမီးလေးIvy ကိုကြည့်ပြီး သဘောတွေကျနေတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ